Voalaza Fa Nobahanana Ny WhatsApp Tao Yemen, “Olana Ara-teknika” Hoy Ireo Mpandraharaha Finday. · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Amr Mostafa Nandika (en) i Afef Abrougui, miora
Voadika ny 19 Oktobra 2016 17:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, русский, Deutsch, Español, Ελληνικά, عربي
Mpisera aterineto ao amin'ny kafe iray ao Yemen. Loharanon-tsary: Banky Iraisampirenena tao amin'ny Flickr
Hatramin'ny 5 Oktobra, an'aliny maro ireo mpampiasa WhatsApp ao Yemen no niatrika fahatapahana saika manontolo mihitsy tamin'ilay fampiasa fandefasana hafatra maika. Maro ireo mpiserasera no nahamarika tamin'ny voalohany fa tsy afaka nidirana tamin'ireo tambajotra findain'ireo roa mpamatsy tolotra finday lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Yemen Mobile sy MTN ny tolotra. Tao amin'ny Twitter, nanome valinteny fohy ho an'ny fanontanian'ny mpampiasa azy ny MTN, nilaza fa fahatapahana noho ny olana “ara-teknika” tao amin'ny YemenNet, ilay mpamatsy tolotra aterineto lehibe ao amin'ny firenena no niteraka izany.
Tsy afaka manokatra na mifandray amin'ny Whatsapp, raha mandeha kosa ny Facebook. Inona no antony?
Tianay ny milaza fa noho ny olana ara-teknika no anton'ny fahatapahan'ny Whatsapp, amperinasa mamaha izany ny YemenNet mpamatsy ilay tolotra
Ny Zoma maraina, niatrika fahasahiranana ihany koa ireo mpampiasa tamin'ny fampiasàna ny Facebook tamin'ny findain'izy ireo, ary nitatitra hoe tsy afaka nijery ireo fampahatsiahivana azy ireo, na toa mandeha ara-dalàna ihany aza ny fidirana amin'ny tranonkala amin'ny alalan'ny fitety.
Taorian'ny fanafihana an'habakabaka tamin'ny Sabotsy izay namono olona 140, vao mainka lasa olana ny fibahanana ireo vovonana fifandraisana, satria mikatsaka ny hifandray sy hifanontany vaovao ireo fianakaviana.
Tsy zavatra vaovao ao Yemen ny fibahanana. Nandritra ny taona maro, nosivanin'ireo manampahefana avy amin'ny tontolo ara-politika isan-karazany ny aterineto noho ny antony izatsy na izaroa. Samy niharan'ny sivana henjana nataon'ny YemenNet, mpamatsy tolotra lehibe sady hany mpamatsy aterineto DSL ao amin'ny firenena,ary mpikambana ao amin'ny Minisiteran'ny Fifandraisandavitra ireo tranonkalan'ny vondrona mpanohitra ara-politika, ny tranonkala ahitàna vontoaty ara-pinoana manokana, sy sary vetaveta.
Kanefa, nitombo ny sivana hatramin'ny niandohan'ny ady ahitana ireo Houthi mpihoko miady amin'ny tafika tsy mivadika amin'ny filoha Abdrabbuh Mansour Hadi, izay tohanan'ireo mpiaradia tarihan'ny Saodiana. Ny Martsa sy Aprily 2015, nobahanan’ ireo Houthi mpihoko mifehy an'i Sana'a renivohitra sy ireo tranom-panjakana maro, isan'ireny Minisiteran'ny Fifandraisandavitra, ny fidirana amin'ny tranonkalam-baovao tao an-toerana sy tany amin'ny faritra noho ny fandrakofam-baovao ataon-dry zareo momba ny ady.
Saingy ankehitriny ny sain'ireo manampahefana toa mitodika any amin'ireo fitaovam-pifandraisana mandroso toy ny WhatsApp sy Telegram, izay manome safidy hafa ho an'ny mpampiasa mba hizara sy hanaparitaka vaovao. Raha ny marina, nahitàna fitomboana ny isan'ny mpampiasa Telegram ao Yemen, satria ahafahan'izy ireo mizara vaovao amin'ny alalan'ny fantson'ilay fampiasa, tsy ilàna fanomezana laharana finday. Vokany, maro tamin'ireo tranonkala voabahana no nifindra tany amin'ireny fampiasa ireny sy ny mitovitovy amin'izy ireny mba hanakikezana ireo mpampiasa azy.
Hatramin'izao, tsy misy ny fanambarana ofisialy natao momba ny WhatsApp. Saingy ahian'ireo manampahaizana eo an-toerana ho fanakatonana niniana natao tamin'ilay tolotra io. Mandalo ao amin'ny YemenNet daholo ny fifamoivoizan'ny aterineto ao Yemen, ary io ampihimamba io no ahafahany mametraka an-tery ny sivana sy ny fanarahana maso amin'ireo mpampiasa efa maherin'ny telo tapitrisa ao amin'ny firenena, indrindra maro amin-dry zareo no mampiasa ny aterineto (fa tsy ireo tolotra fifandraisandavitra nentim-paharazana) mba hifandraisana.
Mandra-pisian'ny fanavaozam-baovao farany momba izay tena antony tao ambadiky ny fahatapahan'ilay tolotra, dia misy tombantombana fa ho bebe kokoa ny sivana ho apetraka amin'ireo mpampiasa aterineto ao Yemen. Toa tsy ho ato anaty fotoana fohy no ho foana ny politikan'ny fametrahana sivana bebe kokoa amin'ireo Yemenita mpisera aterineto, fa mbola mitoetra ny fanontaniana na ho ampy na tsia ny sivana tahàka izany mba hisorohana ny fahazoana vaovao, indrindra fa miaraka amin'ny fisian'ireo fitaovana toy ny Psiphon handinganana ny sivana amin'ny aterineto.
Nandray anjara tamin'ny famoahana ity lahatsoratra ity ilay Yemenita mpanao gazety sady mpikatroka mafàna fo, Walid Al-Saqaf.